Nhau - Iyo 22nd Hortiflorexpo IPM Beijing Sept 16-18 2020
Mucheka Wekusvina Mashizha Nereza
Ye 22nd Hortiflorexpo IPM Beijing Gunyana 16-18 2020
Zhengchida's timu yekutengesa yakapinda makumi maviri nemavirind Hortiflorexpo IPM Beijing Exhibition panguva yaGunyana 16-18th, 2020. Mhemberero yekuvhura yaive chiitiko chakanakisa.
Nekuda kweye convid-19, iyi ndiyo 1st uye chete kuratidzira kwatakapinda gore rino, asi kunogona kunzi kubudirira kukuru. Isu takashanyirwa nevatengi vazhinji vepamusha vaiuya kubva kumafekitori ekucheka, vatengesi vemaki, nemakambani ekutengesa. Vazhinji vevatengi vekunze vanobva kuSoutheast Asia, seKorea, Japan neThailand. Mumazuva ese matatu, dumba redu rakanga rizere nevanhu uye vakomana vedu vakaramba vakabatikana.
Takaratidza zvigadzirwa zvedu zvitsva nezvinyorwa. Vatengi vazhinji vakaratidza kufarira kukuru kune zvigadzirwa zvedu zvemashizha ekucheka uswa, mabhureki ekucheka mabheji, edger blade, hedge trimmer blades uye flail mapanga. Ivo vakakwezvwa neyedu inogadzirwa zvigadzirwa, izere dzakasiyana mhando, yakaderera MOQ uye hunyanzvi, vamwe vacho vakatoita chibvumirano nesu mudumba. Pakazopera chiratidziro, takagamuchira makadhi ebhizinesi anopfuura zana.
Isu takasanganawo nemazhinji evatengi vedu vekare vakatendeka. Isu takataura nezve mirairo, takagovana zviwanikwa zvitsva, takakurukura nezvezvirongwa zvitsva, uye nekupanana pfungwa nezvemaitiro emabhizimusi. Kutenda kune vatengi vedu vakanaka, kuti Zhengchida inogona kuva nekugadzikana kwakasimba kukura mumakore ano. Tichaenderera mberi nekupa rutsigiro rwehunyanzvi uye nekuvandudza sevhisi yedu yekuchengetedza hurefu-bhizinesi hukama uye hushamwari.
Ndinovimba vanhu vanobva munyika dzakasiyana vanobatana pamwechete kurwisa Convid-19, uye chirwere chinonyangarika mune ramangwana rekutanga. Ipapo tinokwanisa kutangazve kuenda kumimwe mienzaniso, saSpoga + Gafa, GIE EXPO, uye Canton Fair kumba nekune dzimwe nyika, kuzivisa mower blade kune vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana dzepasi. Tinotenda kuti kuvimba nehunhu hwedu hwakatanhamara, sevhisi, ruzivo uye nemutengo, isu tichava vanozivikanwa uye vanofarirwa nevazhinji vatengi.
Pasina nguva refu yapfuura, Zhengchida yakanga iine mem ...
Maitiro ekuisa iyo Mower Mulching Nereza
Mhando dzeLower Mower Blades: Mashizha ekucheka lawn ...